2013 Honda N-One Mini Car ထွက်ရှိ - ဒီဇိုင်းဆန်းသစ်ပြီး န... | CarsDB
2013 Honda N-One Mini Car ထွက်ရှိ -...
2013 Honda N-One Mini Car ထွက်ရှိ - ဒီဇိုင်းဆန်းသစ်ပြီး နှစ်လိုဖွယ်ကောင်း
ယခုတစ်လော နာမည်ကြီးကားကုမ္ပဏီကြီးများ မီနီကားငယ်လေးတွေ အပြိုင်အဆိုင်ထုတ်လာကြတာကိုတွေ့ရပါသည်။ Chevy Spark, Scion IQ, Mini Cooper, FIAT 500 စသည်ဖြင့်ဈေးကွက်မှာ အပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်နေတာကို စာဖတ်သူတို့သတိထားမိကြမည်ထင်ပါသည် ။ မီနီကားငယ်လေးတွေကို ဂျပန်ဈေးကွက်မှာသာ ယခင်ကအတွေ့များခဲ့ပါသည်။ Kei Car ဟု ဂျပန်လိုခေါ်ကြပြီး ဂျပန်ပြည်သွင်းသုံးရန်သာထုတ်လုပ်ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Export လုပ်လေ့မရှိကြပါ။ ထို့အတွက်ကြောင့်လည်း အမေရိကန်ကုမ္ပဏီများက အထက်ပါ မီနီကားများကို စတင်ထုတ်လုပ်လာကြခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းတိုင်းပြည်များတွင် ယာဉ်ရပ်နားရန်ခက်ခဲခြင်း၊ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့ခြင်း၊ ဓါတ်ဆီ ဈေးကြီးခြင်းတို့ကြောင့် မီနီကားများပေါ်ပြူလာဖြစ်လာပါသည်။
ထို့အတွက်ကြောင့် ယမန်နေ့တွင် Honda ကုမ္ပဏီမှလည်း ယင်း၏ ပေါ်ပြူလာ N-One 2013 ထွက်ရှိတော့မည်ဟု အသေးစိတ်ကြေငြာလိုက်သည်။ ၁၉၆၇ ခုနှစ်တွင်စထုတ်ခဲ့သော ထိုကားငယ်လေးများသည် ဂျပန်ပြည်တွင်းဈေးကွက်တွင် အလွန်အသုံးဝင်သော လူကြိုက်များသောကားလေးများဖြစ်ခဲ့သည်။ ယခု Honda N-One 2013 တွင်လည်း ဒီဇိုင်း၊ ကိရိယာစုံလင် ဆန်းသစ်စွာဖြင့် တစ်ဖန်ပြန်ထုတ်လုပ်ထားသဖြင့် လူငယ်ဆန်၊ ချစ်ခင်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသော ကားတစ်စီးဖြစ်သည်ကို မြင်တွေ့ရပေမည်။ 660 cc (.66 liter) ကားငယ်လေးဖြစ်ပြီး 2WD သို့ 4WD (all wheel drive) ဆိုပြီး ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ Power အားဖြင့် ပုံမှန် မြင်းကောင်ရေ 58 HP ရှိပြီး Turbo Charge လုပ်လျှင် 64 HP အထိ အသုံးပြုနိုင်သည်။ မြန်နှုန်း ကီလို 100-120 အထိ မောင်းနှင်နိုင်မည်ဟု ကြားသိရသည်။ မြို့တွင်းနဲ့ ဟိုင်းဝေးအနည်းအကျဉ်းလောက်တော့ရနိုင်မည်ထင်သည်။ Auto Gear နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည့် ဆီစားသက်သာသော CVT (continuously variable transmission) ကို အသုံးပြုထားသည့်အတွက် Manual သမားများတော့ စိတ်ပျက်ပေလိမ့်မည်။ သို့သော် Honda N-One ကားသည် 133.3 inches သာ ရှည်လျားပြီး ၁တန် ပြည့်ဖို့ အများကြီးလိုသောကြောင့်အင်မတန် သေးငယ်ပေါ့ပါးသည်ဟုဆိုနိုင်သည်။ အနီးစပ်ဆုံး FIAT 500 ထက်အဆများစွာသေးငယ်နေသေးသည်ဟုလည်း သိရှိရသည်။ ကားအရွယ်အစားကိုလျှော့ချရန် Honda သည် ဤကားငယ်တွင် ဆီတိုင်ကီကို မူလ အနောက်ဘက် ခရီးသည်ထိုင်ခုံအနားမှ ဒရိုင်ဘာထိုင်ခုံအောက်သို့ရွှေ့ပြောင်း ထားရှိလိုက်သည်။ အသစ် ရောင်းဈေး US$ 14,000 ခန့်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံတွင်သာရောင်းချမည်ဖြစ်သည့်အတွက် မိတ်ဆွေတို့ လိုချင်လျှင် Second Hand သာရနိုင်ပါသည်။
စာရေးသူအနေဖြင့် Honda N-One ကို Chevy Spark 2013 ဖြင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မိရာ အောက်ပါ အချက်များတွင် မယှဉ်နိုင်သည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။
၁. Honda N-One ၏အမြင့်ဆုံးပါဝါသည် 64 HP သာရှိပြီး Chevy Spark က 84 HP အထိ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း
၂. Chevy Spark တွင် Manual 5-Step Gear အသုံးပြုနိုင်ခြင်း
၃. နိုင်ငံတကာတွင် ၀ယ်ယူနိုင်ခြင်း
သို့သော်ငြားလည်း အင်မတန် ဆန်းသစ်နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသည့် ဒီဇိုင်း၊ အတွင်းခန်းကျယ်ဝန်းမှု စသည့်အချက်များကြောင့် Honda N-One ကိုလည်း ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလူကြိုက်များကြမည်မှာမလွဲပေ။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း မကြာမီကာလများမှာ တင်သွင်းလာသည်ကို တွေ့ရမှာ သေချာပါသည်။ မိတ်ဆွေတို့ကော ဤ ကားငယ်လေးများကို နှစ်သက်ကြပါသလား။ သို့မဟုတ် အခြားဘယ် မီနီကားကို အကြိုက်ဆုံးလဲ ခင်ဗျာ။
ယခုတဈလော နာမညျကွီးကားကုမ်ပဏီကွီးမြား မီနီကားငယျလေးတှေ အပွိုငျအဆိုငျထုတျလာကွတာကိုတှရေ့ပါသညျ။ Chevy Spark, Scion IQ, Mini Cooper, FIAT 500 စသညျဖွငျ့စြေးကှကျမှာ အပွိုငျအဆိုငျဖွဈနတောကို စာဖတျသူတို့သတိထားမိကွမညျထငျပါသညျ ။ မီနီကားငယျလေးတှကေို ဂပြနျစြေးကှကျမှာသာ ယခငျကအတှမြေ့ားခဲ့ပါသညျ။ Kei Car ဟု ဂပြနျလိုချေါကွပွီး ဂပြနျပွညျသှငျးသုံးရနျသာထုတျလုပျကွခွငျးဖွဈပါသညျ။ Export လုပျလမေ့ရှိကွပါ။ ထို့အတှကျကွောငျ့လညျး အမရေိကနျကုမ်ပဏီမြားက အထကျပါ မီနီကားမြားကို စတငျထုတျလုပျလာကွခွငျးဖွဈနိုငျသညျ။ ၎င်းငျးတိုငျးပွညျမြားတှငျ ယာဉျရပျနားရနျခကျခဲခွငျး၊ ယာဉျကွောပိတျဆို့ခွငျး၊ ဓါတျဆီ စြေးကွီးခွငျးတို့ကွောငျ့ မီနီကားမြားပျေါပွူလာဖွဈလာပါသညျ။
ထို့အတှကျကွောငျ့ ယမနျနတှေ့ငျ Honda ကုမ်ပဏီမှလညျး ယငျး၏ ပျေါပွူလာ N-One 2013 ထှကျရှိတော့မညျဟု အသေးစိတျကွငွောလိုကျသညျ။ ၁၉၆၇ ခုနှဈတှငျစထုတျခဲ့သော ထိုကားငယျလေးမြားသညျ ဂပြနျပွညျတှငျးစြေးကှကျတှငျ အလှနျအသုံးဝငျသော လူကွိုကျမြားသောကားလေးမြားဖွဈခဲ့သညျ။ ယခု Honda N-One 2013 တှငျလညျး ဒီဇိုငျး၊ ကိရိယာစုံလငျ ဆနျးသဈစှာဖွငျ့ တဈဖနျပွနျထုတျလုပျထားသဖွငျ့ လူငယျဆနျ၊ ခဈြခငျနှဈသကျဖှယျကောငျးသော ကားတဈစီးဖွဈသညျကို မွငျတှရေ့ပမေညျ။ 660 cc (.66 liter) ကားငယျလေးဖွဈပွီး 2WD သို့ 4WD (all wheel drive) ဆိုပွီး ရှေးခယျြဝယျယူနိုငျပါသညျ။ Power အားဖွငျ့ ပုံမှနျ မွငျးကောငျရေ 58 HP ရှိပွီး Turbo Charge လုပျလြှငျ 64 HP အထိ အသုံးပွုနိုငျသညျ။ မွနျနှုနျး ကီလို 100-120 အထိ မောငျးနှငျနိုငျမညျဟု ကွားသိရသညျ။ မွို့တှငျးနဲ့ ဟိုငျးဝေးအနညျးအကဉျြးလောကျတော့ရနိုငျမညျထငျသညျ။ Auto Gear နညျးပညာတဈခုဖွဈသညျ့ ဆီစားသကျသာသော CVT (continuously variable transmission) ကို အသုံးပွုထားသညျ့အတှကျ Manual သမားမြားတော့ စိတျပကျြပလေိမျ့မညျ။ သို့သျော Honda N-One ကားသညျ 133.3 inches သာ ရှညျလြားပွီး ၁တနျ ပွညျ့ဖို့ အမြားကွီးလိုသောကွောငျ့အငျမတနျ သေးငယျပေါ့ပါးသညျဟုဆိုနိုငျသညျ။ အနီးစပျဆုံး FIAT 500 ထကျအဆမြားစှာသေးငယျနသေေးသညျဟုလညျး သိရှိရသညျ။ ကားအရှယျအစားကိုလြှော့ခရြနျ Honda သညျ ဤကားငယျတှငျ ဆီတိုငျကီကို မူလ အနောကျဘကျ ခရီးသညျထိုငျခုံအနားမှ ဒရိုငျဘာထိုငျခုံအောကျသို့ရှပွေ့ောငျး ထားရှိလိုကျသညျ။ အသဈ ရောငျးစြေး US$ 14,000 ခနျ့ရှိမညျဖွဈပွီး ဂပြနျနိုငျငံတှငျသာရောငျးခမြညျဖွဈသညျ့အတှကျ မိတျဆှတေို့ လိုခငျြလြှငျ Second Hand သာရနိုငျပါသညျ။
စာရေးသူအနဖွေငျ့ Honda N-One ကို Chevy Spark 2013 ဖွငျ့နှိုငျးယှဉျကွညျ့မိရာ အောကျပါ အခကျြမြားတှငျ မယှဉျနိုငျသညျကိုတှရှေိ့ရသညျ။
၁. Honda N-One ၏အမွငျ့ဆုံးပါဝါသညျ 64 HP သာရှိပွီး Chevy Spark က 84 HP အထိ အသုံးပွုနိုငျခွငျး
၂. Chevy Spark တှငျ Manual 5-Step Gear အသုံးပွုနိုငျခွငျး
၃. နိုငျငံတကာတှငျ ဝယျယူနိုငျခွငျး
သို့သျောငွားလညျး အငျမတနျ ဆနျးသဈနှဈလိုဖှယျကောငျးသညျ့ ဒီဇိုငျး၊ အတှငျးခနျးကယျြဝနျးမှု စသညျ့အခကျြမြားကွောငျ့ Honda N-One ကိုလညျး ကမ်ဘာတဈဝှမျးလူကွိုကျမြားကွမညျမှာမလှဲပေ။ ကြှနျတျောတို့ မွနျမာနိုငျငံတှငျလညျး မကွာမီကာလမြားမှာ တငျသှငျးလာသညျကို တှရေ့မှာ သခြောပါသညျ။ မိတျဆှတေို့ကော ဤ ကားငယျလေးမြားကို နှဈသကျကွပါသလား။ သို့မဟုတျ အခွားဘယျ မီနီကားကို အကွိုကျဆုံးလဲ ခငျဗြာ။
Posted at: 04-11-2012 19:29 PM